Nyocha - Popular Jewelry
Dabere na 232 nyocha
Aztec Sun Kalịnda Pendant w / Diamond Cut Border (14K)
Mmanụ acomụ Mmanụ Mkpokọ Cubic Zirconia Stud Earring Sterling Silver
Ududo Spiga / Square Ejiri (14K)
Kevin na ezinụlọ nyere nnukwu ndị ahịa ọrụ. Ha maara nke ọma banyere ajụjụ ọ bụla m mere banyere ibe ahụ. Ezigbo mma, sie ike ma rụọ ọrụ nke ọma. Ukwuu nwere ike ikwu.
Ibe mara mma ma gafere atụmanya m. Laghachi maka ASAP ndị ọzọ
Oval Pinky mgbaaka Ring (14K)
ndị kasị mma nke kacha mma, magburu onwe ọrụ dị ka ọ dị na mbụ.
Ọrụ magburu onwe ya na ngwaahịa ka ukwuu
Anyị natara ihe anyị zụtara ma enwere m ike ịsị na ha mara mma! The ọrụ magburu onwe. M ga-akwadoro ya Popular Jewelry 1000%
"BABY" Mgbanaka (14K)
Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
Ezigbo ịhụnanya na mpempe a! Dị otú ahụ dị ịtụnanya mma 14k gold, M nwere ike na-eche na-azụta m ọzọ ibe si ebe a!
Miin Cuban Link Chain - Igbe mkpọchi (10K)
Enwere afọ ojuju
Ọrụ ndị ahịa Emailed wee gwa Kevin ọ na-enyere m aka ikpebi ọnụọgụ m chọrọ. M ga-azụ ahịa popular jewelry n'ọdịnihu dị nso!
Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ (Etched Edge)
Kpamkpam dị egwu na-aga ebe a mbụ site ugbu a.
Akwụkwọ Ozi Ederede mbụ & Obi Fure Pendant (14K)
Akwa Ogo / Ọrụ
Enyi m nwanyị hụrụ ya n'anya nke ukwuu, nkwakọ ngwaahịa dị mma, ihe ngosi dị ọcha. Ezigbo ndị ahịa! Enweghị nsogbu ebe a ga - akwado - Keanu
Anya Ọjọọ (14K)
Naanị m na-azụta ọla m popular jewelry. Ya mere, na-ekwenye ma na-enye aka.
Hoop Ear (Mkpụrụ) 14K
Nkọwa ahụ ziri ezi na ngwaahịa ahụ bụ naanị ihe m na-achọ. Echere m na nke a Popular Jewelry ma ga-azụta ọzọ n'oge na-adịghị anya!
Akara Ọganiihu Jade Teardrop Pendant (14K)
10/10, ọrụ ndị ahịa dị ịtụnanya sitere na Kevin. Afọ juru gị na nke a mara mma
Obi & Rose Pendant (14K)
Mara mma mara mma
Azụrụ m obere ihe a dị ka onyinye agbamakwụkwọ maka enyi m. Nke a bụ mbụ m zụrụ na Popular Jewelry. My kọntaktị, Kevin, bụ nnọọ mma na-enye aka. Daalụ nke ukwuu maka ozi ịntanetị gị niile. Mgbe m nyere iwu, Kevin matịrị wee gwa m na ihe a na-enye iwu. Mgbe emechara (ihe dị ka ụbọchị 10), Kevin zitere m foto nke ihe eji eme ya. Bọchị atọ ka e mesịrị, enwetara m ya (site na mail, m bi na FL). Daalụ nke ukwuu! Ihe olu a mara mma! Hụrụ ya n'anya!
CZ Emepụtara Donald Duck (Sterling Silver)
Ọ dị ịtụnanya
ahụrụ m ya n'anya
Chainisị Singị (14K)
Enwetara m usoro a mara mma.
Iced-Out Motorcycle Pendant (ọla ọcha)
Swag bombu na-emeri
Onye isi Indian Diamond-Cut & Multi-Color CZ Ring (10K)
Amazing ahịa ọrụ zara ajụjụ m niile Ẹnam ekese na-esote mgbanaka mara mma nkà ịrụ bụ naanị pụtara ịrapara popular jewelry dị ka onye na-adịgide adịgide ọla
Miami Cubanlink ọla ọcha (White)
Ngọzi Yin Yang Black Onyx na nne Pearl Pendant (14K)
Ọrụ ndị ahịa bụ ịtụnanya. Ha zipụrụ ngwa ngwa. Ha dị obiọma. Ha si n'ime ihe abụọ m chọrọ mana emaili m ozugbo ozugbo na nhọrọ ọzọ. Nke a ga-abụ ebe kachasị m ga-azụta!
Ihe ịtụnanya !!
M nnọọ n'anya a yinye .. ịtụnanya àgwà na nke zuru okè nke m !!! Ndi% 100 gha nye iwu ka eweputa ulo oru a;) 10/10!
mgbanaka m abu o m zutara si popular jewelry agbajikwa m .. ihe a wutere m nke ukwuu. nkwụghachi azụ agaghị m amasị m dịka mgbanaka mgbanaka m nwere ike ịnye foto m wutere m nke ukwuu ị nwere ike ịlaghachikwute m.
Nwa Jade Ring Band
Osimiri Miami-Cuban Link Chain (14K Yellow Gold)
Miami Cuban siri ike njikọ 14K Yellow Gold